Momba anay - Quanzhou Stamgon Trading Co., Ltd.
Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd. efa nanao asa an-tserasera nanomboka tamin'ny1993. Ny vokatra ataonay dia misy ny akanjom-pasika amoron-tsiraka, ny akanjo fitondra milomano ary ny fitafiana yoga sns .. Ireo tsenanay lehibe indrindra dia any amin'ny firenena eoropeana, Amerika Avaratra, pasifika atsimo ary firenena any Azia Atsimo Atsinanana. Manana orinasa fiarahamiasa fito izahay, manana mpiasa mahay 2300. Mahatratra roapolo tapitrisa dolara amerikana isan-taona ny famokarana famokarana anay.
Manana fiaraha-miasa akaiky akaiky amin'ny mpanjifa toa an'i Zara, K-tsena, sns izahay. Manentana an-kitsirano ireo namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hitsidika ny orinasa izahay ary hiresaka momba ny orinasa miaraka aminay. "Ny momba ny mpanjifa rehetra no tena manan-danja indrindra, ny fanomezana ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa" dia ny fikaohanay. Ho fiaraha-miasa efa ela hatrany izahay ary manantena ny ho mpiara-miasa tsara indrindra miaraka aminao.
Fampirantiana any Melbourne (07 / 11-09 / 11)
Seho fampiratiana (4 / 2-7 / 2)
Fampirantiana ISPO (2 / 86-01 / 07)
Mpitsidika mitsidika anay
Etazonia fitsidihana ny mpanjifa